Dhab ahaan waxaa dadka soo maray waqti wax la sheego uusan ahayn (uusan jirin).
Annagaa ka abuuray dadka dhibic isku Dheehan, Imtixaan Dartiis, waxaana ka yeellay wax maqle wax arka ah.
Annagaa u darabnay Gaalada silsilado iyo katinado iyo naarta Saciira.
kuwa Baarriyiinta ah waxay ka cabbi weel Buuxa oo lagu Dheehay kaafuur.
Wayna oofiyaan Nadarka, waxayna ka yaabi maalin sharkeedu fidi (qiyaamada).
Waxayna Quudiyaan iyagoo jecel miskiinka Agoonka iyo kan xabbisan (Dhibban).
Iyagoo Dhihi waxaan idiin quudinnay dar Eebe, mana idinka doonaynno Ahaalmarin iyo Mahadnaq Midna.
Waxaan ka Yabaynaa Eebahanno Maalin (wajigu) doorsoomi oo Daran.
Eebana waa ka Dhawray sharka Maalintaas, wuxuuna siiyay nuur iyo Farax.
Waxaa lala kor socon weelal Fidla ah iyo Koobab Quruurado ah.
Quruuradahaas oo fidla ah si fiicanna u Qiyaasan.
Waxaana laga Waraabiyaa Ehlu jannaha Sharaab macaan oo lugu Dheehay sinjibiil.
Waxaana u ageegi wiilal waari, Haddaad Aragtana aad u malayn Jawhar la saydhay.
Haddaad Aragto halkaas waxaad arki nicmo iyo sharaf wayn.
Dharkooduna (Ehlu Jannaha) waa xariir Jilicsan oo cagaaran iyo Xariir adagba, waxaana loo xidhi fidlo Gacmaha la Gashado, Eebana wuxuu ka waraabiyaa sharaab nadiifah.
Ee ku Samir Xukunka Eebe, hana Maqlin Dambiile iyo Gaalnima Badane (warkiis).
Xus magaca Eebe subax iyo Galabba.
Habeenkana Eebe u sujuud, una tasbiixso Habeenkii (u tuko) waqti Dheer.
Kuwaasi waxay Jecelyihiin tan soo Dagdagaysa (Adduunyada) waxay kaga Tagayaan Gadaashoodana Maalin Culus (Qiaamada).
Annagaa Abuurray Dadka, Adkaynayna xubnohooda, Haddaan Doonnana waxaan ku Baddalaynaa kuwa la mid ah.
Suuraddani waa waano, Ee Ruuxii Doona ha ka yeesho Eebe Xaggiisa waddo.
Waxna ma dooni kartaan in Eebe doona mooyee, Eebana waa wax walba oge falsan.
Wuxuu galiyaa naxariistiisa ruuxuu doono, daalimiintana wuxuu u darbay cadaab daran.